N'èzí Cabinet Cooling
Industrial akpaaka Cooling
Energy Nchekwa Cooling
AC kwadoro n'èzí kabinet obi jụrụ na Sprint (US)
site ha na 18-10-24
ngwa: Sprint bụ otu n'ime isi mobile rụọ na United States. Envicool si AC kwadoro ikuku conditioner etinyere dị ka ngwá ọrụ jụrụ ngwọta na Sprint si n'èzí BTS batrị cabinets kemgbe 2012 mba. Isi: Mankeumman nnabata & certificated IP55 High ume arụmọrụ PR ...
XRow obi jụrụ ngwọta na otu n'ime ndị kasị eweta ọrụ ịntanetị si data center (China)
ngwa: The ọrụ bụ otu n'ime ndị kasị internet na enye ọrụ na China, nke bụ ma ama n'ihi na ya dị iche iche na internet ọrụ. Ọ ekesịpde di na nwunye data emmepe n'etiti China akwado ya nnukwu data okporo ụzọ. Envicool ghọrọ isi jụrụ ngwọta na-eweta kemgbe 2013 maka ya data center ya ...
ngwa: Yizhuang IDC, otu n'ime 5-kpakpando IDC data center ekesịpde China unicom, bụ a na-eduga data center n'ime na Beijing China. Nke a data center na-eme ọtụtụ ihe dị mkpa data okporo ụzọ nke China unicom. Envicool nyere 62 nkeji nke 100kW CyberMate CRAC usoro maka nke a data center na 2013 ...
DC kwadoro n'èzí kabinet obi jụrụ na Ooredoo (Iraq)
ngwa: Ooredoo bụ otu n'ime isi multi-mba mobile rụọ. Envicool si DC kwadoro ikuku conditioner etinyere dị ka ngwá ọrụ jụrụ ngwọta na Ooredoo si n'èzí BTS cabinets kemgbe 2013 na mba dị iche iche. Isi DC kwadoro Compressor ikuku ọnọdụ enweghị inverter High en ...